Muwaadin Eritrean ah oo ka hor qirtay maxkamad in uu taageerey Al-shabaab – SBC
Muwaadin Eritrean ah oo ka hor qirtay maxkamad in uu taageerey Al-shabaab
Posted by Webmaster on Juun 15, 2012 Comments
Washington:- Nin u dhashay dalka Eritrea oo lagu magacaabo Maxed Ibraahim Axmed ayaa ka hor qirtay maxkamad ku taal dalka mareykanka eedeenada loo soo jeediyey in uu taageero u fidiyey xarakada Shabaab-Almujaahidiin ee dalka Somalia.
Mr Maxed Ibraahim Axmed oo ku noolaa dalka Sweden ayaa u safray Somalia sanadkii 2009 si uu u baro Al-shabaab sida loo sameeyo bambooyinka iyo qarxinteeda.
Axmed oo da’diisu tahay 38 jir ayaa waajihi doono tuhun ah in uu ku taageeray Al-shabaab lacag dhan 3 kun oo dollar.
Ciqaabta eedeesanaha ayaa gaareysa toban sano oo xabsi ah waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo bisha November ee soo socoto.
Eedeesanaha ayaa lagu xiray dalka Nigeria bishii November 2009 kadibna waxaa loo tarxiilay dalka mareykanka kadib markii uu xirnaa afar bilood.
Xeer ilaaliyaha guud ee Manhattan ayaa sheegay in maxed Ibraahim Axmed uu lakulmay daal safar dheer uu uga tagay dalka uu ku noolaa ee Sweden isagoo u kicitimay dalka Somalia islamarkaana uu raacay wadadii Xarakada Al-shabaab Al-mujaahidiin uuna noqday cadow shacabka iyo dalka mareykanka, waa suu hadlaka u yiriyee.
Sida lagu sheegay dukumintiyada la hor keenay maxkmadda eedeesanaha ayaa iibsaday inta uu ku sugnaa Soomaaliya qoriga kalashkoofka ama AK47 iyo labo bombo gacmeed .
Xarakada Al-shabaab Al-mujaahidiin ayaa ah mid lagu yaqaan in ay u qorato dagaal yahanada ajaanibta kuwaasi oo kasoo qeybgalay dagaalada ciraaq iyo Afghanistan.
Dowladda mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay soo bandhigtay abaalmarin lacageed oo lagu qiyaasay 33 malyan oo dollar si macluumaad looga helo saraakiisha sar sare ee Xarakada Al-shabaab gaar ahaan toddobo sargaal oo la dul dhigay qiimo lacageed oo kala duwan, waxaana kamid ah Fu’aadd Maxed Khalaf oo ah muwaadin soomaaliyeed oo wata dhalashada Sweden oo la’aaminsan yahay in uu kamid yahay dadka maalgeliya xarakada Al-shabaab Al-mujaahidiin.